प्रदेश राजधानी बारे कांग्रेसले कुनै निर्णय गरेको छैन–नेता महत – दाङ खबर
प्रदेश राजधानी बारे कांग्रेसले कुनै निर्णय गरेको छैन–नेता महत
दाङ, माघ ३ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले प्रदेशको राजधानी बारे पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियनले बिहीबार दाङको घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका डा. महतले राजधानीको टुंगो प्रदेश सभाबाट गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै यस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीभित्र निर्णय नहुने बताउनुभएको हो ।
पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको उपस्थितिमा आज बुटवलमा खबरदारी सभाको आयोजना हुँदै छ नि भन्ने पत्रकारहरुको जिज्ञासामा डा. महतले भन्नुभयो, ‘बुटवल क्षेत्रका नेताहरुले बुटवल राजधानी हुनुपर्छ भन्नुलाई पार्टीको निर्णय मान्नुहुँदैन । यदि कोही नेताले पार्टीको निर्णय भन्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो ।’ कांग्रेस कानुनीराजमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले संविधानको बिरुद्धमा गएर पार्टीले कुनै गतिविधि सञ्चालन नगर्ने बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रलाई तर्साउने नीति लिएर सरकारले इतिहासमै गम्भीर गल्ती गरिरहेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले यसबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने बताउनुभयो । प्रेस युनियन दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष देव यादवले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो, भने सहजीकरण सचिव आरके सितलले गर्नुभएको थियो ।
Prevसमायोजनमा जान कर्मचारी उत्साहित
Nextपर्वत बस दुर्घटना अपडेट- ५ जनाको मृत्यु, ३६ जना घाइते
रोटरीका विद्यार्थीद्वारा बृद्धाश्रमलाई सहयोग